Igwe DVI & VGA
Obere MiniDP & DP
Ogwe Ugwu Panel
USB-C USB & nkwụnye nkwụnye
Ekwentị Ngwa Ngwa
Nchaji USB Gịnị
Izute Anyị na ngosi
Kedu ihe kpatara ịhọrọ Agalink
Bụ gị Gịnị RoHS ma ọ bụ rute n'ikedo?
Ee, ihe nile na ngwaahịa si Umateck bụ Dabara na RoHS (Ibenata mmasi nke Hazardous bekee) na iru (Registration, Evaluation, ikike, na mmachi nke Chemical bekee), Anyị na-enwe ike nyere ule akụkọ niile ihe onwunwe nke ngwaahịa na-eji. Anyị na-enwe ike inye a nkwupụta iji hụ na ngwaahịa ị zụrụ n'aka anyị na-RoHS ma ọ bụ rute nnabata. Kpọtụrụ anyị ugbu a iji nweta a nkwupụta ma ọ bụ ule akụkọ.
Olee otú ngwa ngwa nwere ike i na-a na-enye site na gị?
Gị ase nwere ike zara n'ime awa 2 na-arụ ọrụ oge, ma ọ bụrụ na anyị na-anya ọrụ ma ọ bụ na ezumike, anyị na-enwe ike zaghachi ị n'ime 24 awa. Arụmọrụ bụ anyị mkpa.
Nwere ike ị na-enye FREE samples maka ịlele quality?
N'aka, anyị na-enwe ike inye a ngwa ngwa sample maka ahịa na-achọpụta na àgwà, samples bụ maa free, ma mbupu na-eri kwesịrị site onwe gị, nke ga-adị ukwuu ma ọ bụrụ na ị nwere ike nye gị ụgbọelu na akaụntụ.
Gịnị bụ gị kacha nta iji ibu?
Anyị kwesịrị MOQ bụ 1000 PC kwa ihe ma ọ bụ kpam kpam 3000 mita raw cable kwa nkọwapụta na otu na agba. maka mbụ imekọ ihe ọnụ, anyị nwere ihe karịrị obi ụtọ ịnabata gị ikpe iji dị ka 1oo PC ma ọ bụ 200 PC. na ọ bụrụ na anyị nwere ebuka, anyị nwekwara ike iji na-ere obere ibu gị, PLS kpọtụrụ anyị na-agwa anyị gị nkọwa chọrọ.
Olee otú ngwa ngwa nwere ike ị na ụgbọ mmiri ndị Gịnị ma ọ bụrụ na i ịtụ ugbu a?
Ọ na-adabere na gị nkọwa, ukwu na package..etc, anyị kwesịrị ụzọ oge bụ 3-4 izu, ọ bụrụ na ọ bụ obere nke ukwu iji na anyị nwere ihe onwunwe na ngwaahịa, anyị na-enwe ike ụgbọ mmiri ya anyị na 1-2 izu. Anyị nwere obi ụtọ ime mkpa n'ihi na ngwa ngwa chọrọ, biko dị nnọọ ka anyị mara gị lekwasịrị.
Nwere ike ị na-enye na-eri irè mbupu ngwọta maka anyị?
Ee, anyị nwere usoro ndị mmekọ na Sea, ikuku na awara awara mbupu, na price anyị ike na-enye bụ nnọọ asọmpi.
Otú ịkwụ ụgwọ, ihe bụ gị ụgwọ okwu?
Anyị kwesịrị ugwo okwu bụ 30% ego, na itule megide B / L, anyị na-enye na-emeghe n'aka dị ka OA30 / 45/60 ụbọchị maka ọma ndibere ahịa na ngụkọta iji ego n'elu 30,000 USD. T / T, L / C, Paypal, Western Union ... etc niile dị.
Ị pụrụ ahaziri ngwaahịa maka anyị?
N'aka, anyị na-elekwasị anya na OEM adịchaghị Gịnị ezi ika, n'agbanyeghị ihe nlereanya, mbukota ma ọ bụ ahaziri ogologo, agba, anyị na-eme ka kpọmkwem ngwaahịa dị ka ihe gị n'ụkọ, dị nnọọ kpọtụrụ na anyị na-ahaziri Gịnị na gị mbọn.
Your Content-aga a
Rịọ A Ndenye Quote. Ị nwere ike nweta a nzaghachi n'ime 24 awa. Na-ekwe nkwa!
Rịọ A Ndenye Quote
Adreesị: Roomlọ 907, South Tower, 288 Xilu Road, Zhenhai, Ningbo, China. 315201
Ekwentị mkpanaaka na: +86 574 8704 2335
Ekwentị mkpanaaka na: +86 189 57871301
Copyright 2012-2019 Agalink.com | Ikike niile echekwabara | Kwadoro site na Ningbo Farsince Electronic Co., Limited